Ka Hor Xaflada Caawa Ee Ballon d’Or Shirkada Nike Oo Si Dadban Ugu Hambalyeeysay Cristiano Ronaldo Ka Sawir Ay Soo Dhigeen Baraha Bulshada - Laacib.net
Ka Hor Xaflada Caawa Ee Ballon d’Or Shirkada Nike Oo Si Dadban Ugu Hambalyeeysay Cristiano Ronaldo Ka Sawir Ay Soo Dhigeen Baraha Bulshada
by Saed Balaleti | Thursday, Dec 7, 2017
Si rasmi ah weli looguma dhawaaqin laakiin hadana warbaahinta isboortiga ayaa qoreysa in Cristiano Ronaldo uu yahay xiddiga ku guuleysan doona abaalmarinta Ballon d’Or caawa iyadoo xitaa shirkada Nike ay u sii dabaaldegtay.
Shirkada agabka isboorti sameysa ee Nike oo uu Ronaldo heshiis xayaysiin ah kula jiro ayaa sameysay sawir ka kooban shan Ronaldo oo midka dhexe uu yahay muuqaalkiisa maanta oo midab dahabi ah loo yeelay, waxaana ay soo dhigeen bogagooda bulshada.
A post shared by Nike Football (Soccer) (@nikefootball) on Dec 6, 2017 at 10:09am PST
In muddo ah ayaa la saadaalinayay in Cristiano Ronaldo uu ku guuleysanayo abaalmarinta Ballon d’Or iyadoo xaflada abaalmarinta ay caawa ka dhici doonto taalada Eiffel Tower ee magaalada Paris.
Shirkada Nike ayaasidoo kale waxa ay soo saartay kabo ay ugu talogaleen inay ugu dabaaldegaan hanashada abaalmarinta Ballon d’Or ee ciyaaryahanka ka soo jeeda jasiirada Madeira ee dalka Portugal, iyado tiro xadidan kaliya la sameeyay.
Kabahaan cusub ayaa si qarsoodi ah loogu baahiyay internetka waa nooc cusub oo tiro xadidan laga sameeyay loona yaqaano Nike Mercurial Superfly V, waxaana loogu magacdaray ‘Quinto Triunfo’ (koobkii shanaad)
Kaliya kun kabood ayay Nike sameysay iyadoo suuqa la gelin doono ka dib xaflada Ballon d’Or, kabo walba waxa ay gadaal kaga qoran lambarka ay ka yihiin kunka kabood ee la sameeyay.